CAQABADAHA KU GEDAAMAN DOORASHADA WAKIILADA IYO DEEGAANKA – Somaliland Elections
CAQABADAHA UGU WAAWEYN EE DOORASHADA HORTAAGAN:
1. SAAMI-QAYBSIGA GOLAHA WAKIILLADA
Bishii February 2005, waxaa golihii wakiillada ee Somaliland ee xilligaas jiray uu ansixiyey Xeer Lr. 20/2005 kaas ay ku jireen qodobo caqabad ku noqonayey qabsoomidda doorashadii golaha wakiillada ee la filayey inay dhacdo isla sannadkaas, waxaana qodobada caqabadda ku ahaa doorashada ee ku jiray xeerkaas doorashada ka mid ahaa, qodobo ay tahay in la qabto doorashada baarlamaanka ka hor oo ay ka mid yihiin:
• Inay mudan tahay in la sameeyo diiwaangelin codbixiye,
• In la sameeyo tirakoob dadweyne,
• Sugidda xuduudaha dalka
• In la kala xadeeyo degmooyinka cusub.
WARBIXINTA OO DHAMAYSTIRAN HALKAN KA AKHRISO: WARBIXINTA DOORASHADA GOLAHA WAKIILADA IYO DEEGAANKA
Dhammaantood waxay ahaayeen caqabado waaweyn oo dabar ku ahaa in doorashada baarlamaanku ay dhacdo sannadkii 2005, hase ahaatee Madaxweynihii Somaliland ee xilligaas Daahir Rayaale Kaahin, wuxuu 19/02/2005 uu qoraal u diray xafiiskii Xeer ilaalinta, iyada oo xeer ilaalintuna ay maalin ka dib u gudbisay maxkamaddii dastuuriga ahayd dacwad nuxurkeedu ahaa, in golaha wakiilladu ay ku xadgudbeen xuquuqdii muwaadinka ee ahayd in la doorto ama uu wax doorto, sidaas awgeed waxay maxkamadda ka codsadeen inay laasho qodobo ku xusnaa xeerkii doorashada baarlamaanku ansixiyeen oo ay xukuumaddii xilligaasi ku doodaysay inay caqabad ku yihiin in doorasho baarlamaan la qabto.
Haddaba 26/02/2005, waxaa maxkamadda dastuuriga ah ee Somaliland ay soo saartay qaraarkan:
Waxaa Maxkamadda u caddaatay in ay qodobada 10aad, 13aad, 38aad, 44aad ee Xeerka Doorashada Golaha Wakiiladu ka soo horjeedaan Dastuurka JSL, Dabar iyo carqaladna ku yihiin qabsoomida Doorashada Golaha Wakiilada mudada loo cayimo. Sidaa darteed, Maxkamadda Dastuuriga ahi waxay laashay qodobada 10aad, 13aad, 38aad, 44aad ee Xeerka Doorashada Golaha Wakiilada ee No. 20-2/05 ee 18/01/05. Qodobada la laalay wixii qaab farsamo ah ee looga maarmi waayo doorashada Madaxtooyada Socodsiinta Hawsha Doorashada Golaha Wakiilada, waxaa loo raacayaa xeerka Doorashada Madaxtooyada iyo Golayaasha Deegaanada Dalka ee Lam.20/2001.
Qaraarkaas maxkamadda ayaa horseeday in wax laga bedelo xeerkii doorashada golaha wakiillada, isla markaana lagu qoro, sida ku cad qodobka 12aad ee Xeerka Lr. 20-2/2005 in saamiga kuraasta golaha wakiillada ee gobollada lagu geli karo oo keliya doorashadan (Doorashadii 29/09/2005).
Haddaba, muddo 14 sannadood ah oo ka soo wareegtay Doorashadii Golaha Wakiillada, illaa maanta oo la joogo, xal lagama gaadhin arrinta saami-qaybsiga kuraasta golaha wakiillada. maaha arrin sharci oo keliya, hase ahaatee waa arrin siyaasadeed, oo u baahan hoggaamin siyaasadeed. dhammaan xukuumadihii dalka soo maray, midna uma badheedhin inuu xal ka gaadho arrintan, waxaana taas bedelkeeda ay doorbideen inay xilka u kordhiyaan golaha baarlamaan ee haatan jooga.
2. XEERARKA DOORASHADA:
Illaa haatan lagama doodin, lamana ansixin Xeerka isku-dhafan ee doorashooyinka, oo ay ku jiraan arrinta qoondada kuraasta haweenka iyo dadka la hayb-sooco ay ka helayaan golaha wakiillada, sidoo kale Xeerka Maamulka Gobollada iyo Degmooyinka oo saamaynaya doorashada Golaha Deegaanka, waxaa ansixiyey golaha wakiillada ee Somaliland, hase ahaatee weli wuxuu horyaallaa golaha guurtida ee Somaliland. Ansixinta Xeerarkani waxay muhiim u tahay qabsoomidda doorashada Somaliland ee u muddaysan inay qabsoonto 12/12/2019.
3. ARRIMAHA NABADGELYADA IYO DOORASHADA
Haddii la rabo in doorashadu ay qabsoonto, waxaa muhiim ah in la helo amni iyo xasilooni siyaasadeed, si muwaadiniintu ay fursad ugu helaan inay wax doortaan ama la doorto. Xiisadaha ka jira gobolka Sanaag, waxay caqabad ku yihiin hannaanka diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo doorashooyinka, waana in si dhakhso ah arrintaas wax looga qabto, si loo helo jawi xasiloon oo lagu diiwaangelin karo muwaadiniinta.
4. WADA SHAQAYN LA’AANTA XISBIYADA.
Shir jaraa’id oo uu qabtay guddoomiyaha Xisbiga Waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro 22/03/2018, waxaa xisbigiisu ay shaaciyeen inay kalsoonida kala noqdeen guddida doorashada ee haatan jira. tan iyo xilligaasna waxaa lagu guul-darraystay wadahadalo kala duwan oo la doonayey in xal lagaga haadho arrinta guddida doorashada. Sidoo kale waxaan meelmarin, heshiiskii ugu dambeeyey ee beesha caalamku dabada ka riixaysay ka dib markii golaha wakiilladu ansixin waayey, Xisbiga Waddanina sheegay inay ka baxeen heshiiskaas. Xarunta Daraasaadka Siyaasadda ee CPA ayaa aaminsan in muddo 21 bilood ah oo ka soo wareegtay doorashadii madaxtinimada ee dalka ka qabsoontay 13/11/2017, inay weli dalka ka jirto kala qaybsanaantii ka dhalatay doorashadaas. Inta ay jirto kala qaybsanaantaasi, waxaa adkaanaysa in la qabto diiwaangelin codbixiye ama doorasho. Sidoo kale Sidoo kale burburka ku yimi heshiiskii ugu dambeeyey ee beesha caalamku ka odayaysay, wuxuu abuurayaa, isfaham-darro cusub oo dhex marta Xisbiyada Mucaaradka iyo Xukuumadda.
1. Waxaan cambaaraynaynaa in Golayaasha Deegaanka ee dalku ay si sharci-darro ah ugu fadhiyaan kuraasta dalka, ka dib markii xilkoodii iyo muddo kordhintii loo sameeyey ay dhammaatay 28/04/2019, waa arrin dhaawac ku ah dimoqraadiyadda iyo dawladnimada inuu xafiis fadhiyo qof wakhtigiisii dhamaaday. Iyada oo la raacayo qodobka 30aad ee Xeer Lr. 23/2002 iyo Qodobka 111(9) ee Dastuurka JSL, waxaan ku baaqaynaa in Golayaasha Deegaanka ee wakhtigoodu dhammaaday inay xilka ku wareejiyaan Xoghayayaasha Dawladaha hoose ee dalka. Haddii sharciga la ixtiraami waayo waxay noqonaysaa arrin ay caadaystaan hoggaamiyayaasha la doortay.
2. Maadaama Guddida Doorashada ee Somaliland ay ku dhawaaqeen in doorasho aanay dhacaynin xilligii loo asteeyey, isla markaana ay u muuqato inay natiijo la’aan ku dhamaatay isfahankii Xisbiyadu kala saxeexdeen, waxaa xaqiiqo ah in haatan taladu markale gacanta u gelayso, golaha Guurtida, si ay muddo kordhin ugu sameeyaan golaha wakiillada, isla markaana iyagu wakhtiga u korodhsadaan, haddaba Xarunta CPA waxay walaac xooggan ka qabtaa, in markale doorashadu dib uga dhacdo wakhtigii loo asteeyey, sidaas awgeed waxaan ku baaqaynaa:
a. In daneeyayaasha doorashooyinka Somaliland ay wada-tashi degdeg ah ka yeeshaan, xilliga ugu horreeya ee ay qabsoomi karaan doorashooyinka Somaliland.
b. In Daneeyayaasha Doorashooyinka Somaliland, gaar ahaan Madaxweynaha oo leh masuuliyadda Koowaad, Xisbiyada Dalka iyo Guddida Doorashooyinku ay isla meel-dhigaan jadwal cad oo muujinaya jidka lagu gaadhayo qabsoomidda doorashooyinka Somaliland, inta aan la helin khariiraddaas, waxaa adkaanaysa inay doorashooyinku ku qabsoomaan xilli kasta oo lagu heshiiyo.
c. In Golaha Guurtidu aanu ku degdegin muddo kordhin uu sameeyo ka hor inta aanay daneeyayasha doorashadu isla meel-dhigin xilliga doorashada
d. In dalalkii ka qayb-qaatay isu-soo dhoweynta Xisbiyada Somaliland, inay markale ka shaqeeyaan, in dedaalkoodu aanuu guul-darraysan.
3. Arrinta Saami-qayb-siga golaha wakiilladu, waa arrin u baahan go’aan siyaasadeed, sidaas awgeed, waxaan soo jeedinaynaa,
a. In madaxweynuhu uu qaato hoggaanka, isla markaana ay la shaqeeyaan guddoomiyayaasha Xisbiyada, iyo cidda kale ee lagama maarmaanka u ah in xal laga gaadho, si looga go’aan gaadho hannaan saami-qaybsi kuraaseed oo lagu geli karo oo keliya doorashada inta aan la samayn tirakoob dadweyne. Arrintaasi waa dabarka ugu weyn horyaalla in la qabto doorashada golaha wakiillada, markasta oo xal ka gaadhisteedu dib u dhacdo waxaa dib u sii dhacaya doorashooyinka golaha wakiillada iyo deegaanka.
b. In la sameeyo tira-koob dadweyne, si xal loogu helo arrinta saami-qaybsiga kuraasta golaha wakiillada ee Somaliland, iyada oo tixgelin iyo qorshe gaar ah laga yeelanayo meelaha uu ka dhici kari waydo tirakoobka dadweyne.
4. Xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa inay wax ka qabato, xaaladaha nabadgelyo ee saamaynta ku yeelan kara doorashooyinka, gaar ahaan xaaladda ka jirta gobollada Bariga Somaliland si loogu diyaargaroobo qabsoomidda diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo hawlaha doorashooyinka.